हेम्प - मद्दत MEHemp प्रयोग गरी टिकाऊ निर्माण
Few बोटहरूले समृद्ध इतिहास प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् र उपयोगिता भांगको। सन हुन सक्छ वस्तुतःका लागि प्रयोग गरिएको सबै- कागज देखि कपडा र पनि लागि दिगो निर्माण।
को लागी प्रयोग खाना, तेल, फाइबर, तेएक्सटाइलहरू, फिडहरू र धार्मिक समारोहहरूसमेत, हेम्पले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ मानव इतिहास भर मा. एक समय हेम्प संसारकै सब भन्दा धेरै बस्तुको बजार थियो। र यो आज पनि एक बहुमूल्य बाली हो.
भांग पनि मा एक महत्वपूर्ण घटक हुन सक्छ तपाईंको सपनाको घर बनाउँदै.
हेम्प के हो?
तपाईं कुनै नराम्रो विचार हुन सक्छ भिंग भनेको के हो र यसले के गर्न सक्दछ. सन एक को तनाव को CANNABIS SATIVA बोट. तर यसको रासायनिक मेकअप, उपयोग, र आकार विज्ञान होपुरा तरिकाले गाँजा भन्दा फरक छ। सन cटेट्राहाइड्रोकानाबिनोलको मात्र ट्रेस मात्रामा पाइन्छ (THC), मारिजुआना मा psychoactive यौगिक फेला।
यो पातलो बोट बिरुवा १ and फिट र मा बढ्न सक्छ एक जत्तिकै बाक्लो व्यास मा ईन्च। मनपर्दैन 'बर्तन,' it is भित्री इनडोर बढ्न असम्भवs यसको जरा फैलनु पर्छ। योaमा पनि बढ्न सक्छ विविधता मौसम
हेम्प एक dioecious संयंत्र हो, जो माध्यम it छ महिला र पुरुष बोट. भांगले उत्पादन गर्न सक्छ तेल र धुम्रपान योग्यबाट उत्पादनहरू यसको फूल र पात, र प्रोटीन उत्पादनहरु यसको बीउबाट बोटको भित्री तह समावेश कडा फाइबर यसले धेरै उद्देश्यहरू पूरा गर्दछ.
बोटको अर्को महत्त्वपूर्ण भागलाई भनिन्छ बाधा। अधिकांश मानिसहरूले यस भागलाई बोटको वुडी कोरको रूपमा लिन्छन्,यसको शोषकको लागि चिनिन्छ, शानदार ध्वनिक र तापीय गुणहरू,यसको साथै सेल्युलोज सामग्री। स्थायी निर्माण हेम्प प्रयोग गरी यो सुविधा बोटको भाग.
Hएम्परेट क concrete्क्रीटले विश्वभर ट्रयाक्सन प्राप्त गर्दैछ। धेरै व्यक्तिहरू दिगो निर्माणको साथ पाटीमा चढिरहेका छन् भांगको प्रयोगबाट यो विशाल अराराको घमण्ड गर्दछफाइदा को y अत्यधिक वातावरण मैत्री हुँदा.
हेम्प प्रयोग गरी दिगो निर्माण को जडहरु
निर्माणमा भांगको प्रयोग नयाँ छैन। वास्तवमा, hEMP थियो प्रयोग समयमा एशियाको भागहरूमा ढु stone्गा युग.पुरातात्विक प्रमाण सुझाव दिनुहोस्s बर्तनहरू र डोरीहरूमा भाँडाको प्रशोधन र प्रयोग the औं शताब्दीको हो। मा आयोजित एक अध्ययन भारत पनि भेटियो हेम्प प्लास्टर in छत, भित्ताहरू, र 30 भन्दा अधिक को फर्श Elloraगुफाहरू
हालको वर्षहरूमा, मानवता देखाईएको छaवातावरणीय स्थिरता र आफ्नो दैनिक जीवनको वातावरणीय प्रभावहरूमा बढ्दो चासो।
निर्माण उद्योग खान्छ एक whopping 40% को कुल ग्लोबल उर्जा, अर्को global०% वैश्विक संसाधन, र २%% विश्वव्यापी पानी प्रयोग. ऊर्जा र स्रोतको उपयोग मा निर्माण को महत्त्व को कारण, यो उद्योगले हाम्रो वातावरणीय प्रभावहरु लाई कम गर्न एक अविश्वसनीय अवसर प्रतिनिधित्व गर्दछ।
हाल, 5,000,००० टन भांग छन् प्रयोग फ्रान्स मा निर्माण को लागी। Hखाली संसारको यस भाग मा प्रयोग गरीयो उपयोगहरु परम्परागत हेम्प र चूने प्रयोग गरिएको पुनर्स्थापना कार्य।
हेम्प प्रयोग गरी दिगो निर्माण मूल रूपमा रूप मा छ हेम्पक्रेट. हेम्पक्रेट is १ concrete% ठोस जत्तिकै घन, अझै पनी फ्लोटs पानीमा हवा भित्र फसेको छ हेम्पक्रेट, जसले प्रदान गर्दछ भयानक इन्सुलेशन र दम। गुese गुणहरू हुन् को लागी उपयोगी प्रबन्ध दुबै आवाज र तातो।
किन हेमको साथ तपाईंको घर बनाउनुहोस्p?
धेरै मानिसहरू खेती गर्छन्e भांग यसको कारण अविश्वसनीय प्रयोगsनिर्माणमा। निर्माणमा हेम्प प्रयोग गर्नका लागि त्यहाँ धेरै मूल्यवान लाभहरू छन्।
हेम्पले निर्माण सामग्रीहरूको नवीकरणीय स्रोत प्रदान गर्दछ। र यसको क्षमता कुनै पनि मौसममा बढ्नको साथ, स्थानीय रूपमा उत्पादन गरिएको हेम्पले यातायातको आवश्यकतालाई हटाउँछ विशाल दूरी मा सामग्री, र यो छस्थानीय किसानहरुलाई सहयोग गर्न एरभ - धेरै धेरै उपभोक्ताहरू र किसानहरूको लागि एक धेरै win-win व्यवस्था।
औद्योगिक भांगले मात्र मान्छे दिन सक्दैन राम्रो भवन भौतिकs, तर यसले ब्राउनफिल्ड्सलाई पनि उपचार गर्न सक्दछ किनकि यससँग अन्य बालीहरूको तुलनामा राम्रो पोषक पदार्थ सेवन हुन्छ। यसको औद्योगिक प्रकृति र अनुप्रयोगको कारण, यो पुन: स्थापना प्रयासहरूको एक हिस्सा हुन सक्छ निम्न जंगलमा आगो त्यो मात्र होइन, तर हेम्प पनि फसल रोटेशनमा राम्रो भाँडामा लिन्छ यसको कारणलेझर्ने पातहरूले जैविक पदार्थको रूपमा काम गर्छन्, र जराले माटोलाई सुस्त बनाउन सक्छ। यो प्राकृतिक उपचार बनाउनs जमिन बढी लचिलो कटाई विरुद्ध।
जब यो कार्बन अनुक्रमको कुरा आउँछ, करीव 325२XNUMX किलोग्राम कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ सुकाएको भानको एक टनमा भण्डारण गरियो। त्यसैले भांग को उपयोग कम कार्बन उत्सर्जन वातावरण मा. प्रत्येक भवन र संरचना विशेषताहेम्प प्रयोग गरी दिगो निर्माण स्टोरs विशाल कार्बन को मात्रा.
कृषि द्वारा उत्पाद
सन उपज २. to देखि 2.5 टन बीचको सुख्खा स्ट्राहरू प्रति एकर यो राशि उल्लेखनीय छ उच्च अन्य कृषि उत्पादनहरुको उत्पादन भन्दा। उदाहरणका लागि, गहुँ पराल मात्र उत्पादन गर्दछ १.२1.25 देखि २.। टन प्रति एकर जब यो आउँछ उत्पादन गर्दै बायोमास उर्जा, निर्माण, वा अन्य उद्देश्यहरूको लागि, हेम्प एक अविश्वसनीय उपजाऊ बाली हो.
घरहरूमा इन्सुलेशन एक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुविधाहरू हुन्। यद्यपि यो हुन सक्छ धेरै महँगो। तर यदि इन्सुलेट गुणहरू तपाईंको निर्माण सामग्रीको साथ पहिले नै आयो भने के हुन्छ? यो फाइदा छ भांगले सम्भव छ। Sभाँडा प्रयोग गरेर ustainable निर्माण तपाईंको उल्लेखनीय कमी हुनेछ भवन लागतs.
Sहेम्प प्रयोग गरेर ustainable निर्माण धेरै सुविधाहरू फाइदाउत्कृष्ट सहित ओसिलो ह्यान्डलिंग र प्रतिरोध। गुese बेनिफिटहरू हुन् सम्भावित अनुपम प्लान्ट-फाइबर इन्सुलेशन सामग्रीहरू उपस्थित छन्, जसमा काठ फाइबर समावेश छ र सेल्युलोज। यस मार्फत, सहन राख्नुहोस्sआर्द्र अवस्थामा पनि सत्यनिष्ठा।
सन अवरोधहरू हो अन्य प्लान्ट फाइबर इन्सुलेशन विकल्पहरूसँग मिल्दा कि नमीको ठूलो सौदा भण्डार गर्न सक्दछ किनकि यसको यसको छिद्रयुक्त संरचना। हेम्पको ओसिलो क्षमता भण्डारणले पनि अनुमति दिन्छ it यसलाई आवश्यक परेको बेला ओसिलोमा लिनुहोस् र त्यसपछि अवस्था छोड्दा यसलाई छोड्नुहोस्। Aक्यूबिक मिटर सहन स्टोर वरिपरि 596 किलोग्राम पानी बाफ को। यो विस्मयजनक भण्डारण क्षमताले उन्नत भएका क्षेत्रहरूका लागि पनि यो एक उत्तम विकल्प हो को स्तरआर्द्रता।
एक उच्च pH स्तर हुनु बाहेक, चूने एन्टिफंगल र एन्टिमाइक्रोबियल पनि हो। कहिलेaचुना कोटिंग भित्र छ को हेम्पक्रेट मिश्रण, मोल्ड सतहमा विकसित हुन सक्दैन यदि तापक्रम र आर्द्रता स्तरले उत्तम वातावरण प्रदान गर्दछ मोल्ड वृद्धि। यी कारकहरूमा यसको लचिलोपन यो एक आदर्श विकल्प हो चिसो र तातो मौसम मा बस्ने मान्छे को लागी।
हेम्प अत्यन्त घन छ। यस सुविधाले यसलाई एक बनाउँछ का लागि उत्कृष्ट स्रोत जगs र भवन संरचनाs,किनकि यो अत्यन्त टिकाऊ र बलियो छ। Wसबै फ्रेमहरू रडबल स्टड फ्रेमि। हेम्पको प्रयोग गर्न सक्दछ। यो तरिकाले, यसले संरचनालाई मद्दत गर्न सक्दछ भारी बोका मुनि साघुँरोबाट वा झुकाईबाट। हेम्पको कठोरता, साथै यसको बनावट सतह, यो एक उत्कृष्ट बनाउँछप्लास्टर समाप्त को लागी उधार विकल्पयो पछि आवश्यक छैन अतिरिक्त सम्बन्ध एजेन्टहरू वा जाल।
हेम्प प्रयोग गरी दिगो निर्माण सम्भव छ by एक सौम्य सामग्री प्रयोग गर्दै यसको स्रोतको रूपमा। अन्य बालीको तुलनामा कम भ्यागुती औषधी समावेश भएको हेम्प उब्जाउने प्रक्रियामा जस्तै फाइबर वा अन्न किनकि यो, बढिरहेको भांग विशेषताहरु वातावरणलाई कम नुकसान देखि it लाई क्षति कम गर्दछ माटो, पानी, र हावा.
जब भान ठीक भई सुकाइन्छ, यो गर्छ ग्यास नदिनुहोस्esर विषाक्त पदार्थ हेम्पको ओसिलो ह्यान्डलिंग क्षमताले ओसिलो वा सुक्खा हावाले गर्दा सबपार इनडोर वातावरणको सम्भावना पनि कम गर्दछ।
हेम्पका लागि अन्य दिगो प्रयोगहरू
सन प्रयोग गर्न सक्छन् pहाम्रो संसारलाई अस्वाभाविक रूपमा प्रभाव पार्छ। टिकाऊ निर्माण हिमशिलाको टुप्पो मात्र हो।
प्लास्टिक प्रदूषण गम्भीर चुनौती हो। हामी सबैले प्लास्टिकको तस्वीर देख्यौं
टापुहरू जसले हाम्रो जलमार्गलाई प्रदूषित गर्दछ। हामी सबैले प्लास्टिक लिने समस्याहरूको बारेमा सुनेका छौं
हजारौं होआरएस ल्याण्डफिल मा बिच्छेद गर्न, जहरीला र हानिकारक ग्यासहरू जलाएर जारी गरियो प्लास्टिक, र को संक्रमण गर्न आवश्यक छ बाट टाढा डिस्पोजेबल उत्पादन र स्ट्राहरू। Wहाइल यी चरणहरू हुन् सहि दिशामा, यी उपायहरू छन् सायद प्लास्टिकको फोहोर कम गर्न अन्तिम समाधान।
हेम्पले प्लास्टिकको लागि गैर-विषाक्त विकल्प उत्पादन गर्न सक्दछ। सामग्री गर्न सक्छन्
कार पार्ट्स देखि कागज सम्म फर्नीचर को लागी केहि पनि उत्पादन। एक अष्ट्रेलियाली
कम्पनीले मात्र उत्पादन गर्न भाँडा र पानी प्रयोग गर्दछ प्लास्टिक विकल्प त्यो काट्न सकिन्छ,
मेशीन गरिएको, पेच गरिएको, नेल गरिएको, चिप्लिएको, रंगीन, र काठमा ती नै तरीकाहरूमा समाप्त भयो
र काठ कोmposites विभिन्न उत्पादनहरू सबै बनाउँछ जबकि पारिस्थितिक मैत्री र
अरबौं मानिसहरु आफ्नो जीवन सजिलो बनाउन जीवाश्म ईन्धनहरूमा भर पर्छन् र शक्ति गर्न कार, ​​जेनरेटर, र कम्प्युटरहरू पनि। यो अपरिवर्तनीय उर्जा स्रोतको धेरै प्रतिकूल प्रभावहरू भएकोले धेरैले जैव ईन्धनको विकल्पको रूपमा देखाएका छन् ऊर्जा स्रोत.
यद्यपि धेरै रिपोर्ट सुझाव दिनुहोस् केही जैव ईन्धनs आउनुहोस्aठाडो मूल्य पछि केहि बाली वातावरणको लागि त्यति राम्रो हुँदैन जति मानिसहरूले एक पटक सोचेका थिए। किनकि भांग बढ्न सक्छ वस्तुतः कुनै पनि तापक्रम र माटो स्वस्थ छोड्नुहोस् रोपे पछियो हो अब विचार गरेaईंन्धन स्रोत लागि हजारौं औद्योगिक अनुप्रयोगहरू। यदि हेम्प मास-उत्पादन, यो हुन सक्छ जैव ईन्धनको एक लागत प्रभावी र कुशल स्रोत जसले विश्वलाई शक्ति दिन र एकै समयमा कार्बन उत्सर्जन कम गर्न सक्छ।
हेम्प जैव ईन्धन उत्पादन गर्न, हेम्प बीउहरू उनीहरूको फ्याट र तेल निकाल्न थिच्न आवश्यक छ। पछि प्रशोधन, परिणामस्वरूप कम्पोनेन्टहरू भण्डार गरिएको, ढुवानी गरिएको, र डिजेलको समान बेचेको छ। हेम्प प्रयोग गर्नाले हटाउने थप लाभ प्रदान गर्दछ नियमित डिजलको गन्ध।
बायोडिजेल बाहेक, सहन इथेनॉलको लागि पनि विकल्प बनाउन सकिन्छ, जुन पेट्रोलमा थप्न सकिन्छ.इथानोल परम्परागत रूपमा डेरिवेटिव frओम बालीहरू जस्तै जौ र मकै, तर सक्छ पनि गठन किण्वन को माध्यम बाट भांगको। यस मार्फत गहुँमा आधारित बालीनालीहरूले गर्न सक्छन् फोकस गर्नुहोस् खाद्य उत्पादन।
प्राय: लुगा आज समावेश कपास, पॉलिएस्टर, नायलन, स्पानडेक्स, र एक्रिलिक। यद्यपि यी संसाधन-गहन हुन् र वातावरणको लागि राम्रो छैनन्। व्यक्तिहरूको लागि कपडा र फाइबरहरूको लागि दिगो विकल्प खोज्दै, भांग छ एक आदर्श विकल्प. कपडा भाँडाले बनेको थियो होकपास भन्दा आठ गुणा बलियो। यो डोरीले डोरी र डु for्गाको लागि पनि प्रयोग गरेको थियो। यो बायोडिग्रेडेबल सामग्री सुविधाहरू महत्त्वपूर्ण फाइदा कृत्रिम कपडाको तुलनामा किनभने यो बढ्न जडीबुटी र कीटनाशक आवश्यक छैन। यसले अक्सिजन पनि उत्पादन गर्दछ र कपास जस्तो पानी-निर्भर हुँदैन।
हेम्पको प्रयोग औद्योगिक भन्दा बढि छ क्षेत्र। यो आश्चर्य बोट गर्न सक्छन् खाना र पेय पदार्थ उत्पादन, जस्तै हेम्प चीज, हेम्प मिल्क, हेम्प प्रोटीन पाउडर, र हेम्प तेल।
अर्को उत्पादन लोकप्रियतामा बढ्दै भाँडा दाना हो। यो सुपरफुड ओमेगा fat फ्याट्टी एसिड र प्रोटीनमा धनी छ। योसँग उच्च ग्लोबुलिन सामग्री पनि छ जसले प्रतिरक्षा प्रकार्य सुधार गर्न सक्दछ।
हेम्प पेपr २०० देखि १ BC० ईसा पूर्वको समयमा हुन्छ चीनको हान राजवंश। भांग बानी थियो दस्तावेज बौद्ध ग्रंथहरु। पछि, सहन साहित्य र ऐतिहासिक कागजातको रेकर्डिंगमा महत्वपूर्ण भयो, जसमा उपन्यासहरू समावेश छन् by मार्क ट्वेन र गुटेनबर्ग बाइबल। Banknotes र हुलाक टिकटहरु ईन्धन स्रोतको रूपमा हेम्प फीचर्ड.
हेम्पमा कागज उद्योगमा क्रान्तिकारीकरण गर्ने क्षमता छ। यो उत्पादन हो अझ बढी वातावरण मैत्री रोजाईले यसले लाखौं हेक्टेयर जsts्गल र जनावरहरूको बासस्थान बचाउन सक्छ। रूखहरू जस्तो नभई, हेम्प पनि छिटो बढ्दछ र उच्च सेल्युलोज कन्सेन्स छtrations, मा प्रमुख घटक कागज मतलब, उत्पादकहरूले कम समयको साथ अधिक कागजहरू बनाउन सक्छन्, कम बोटबिरुवा, र ग्रह लाई कम क्षति.
भाँडा प्रयोग गरेर टिकाऊ निर्माण सम्भव छ
Peple आज महसुस त्यो हेम्पले विश्वभरिका समुदायहरूलाई सुदृढ पार्न धेरै सम्भाव्यता राख्छ। अब ती राष्ट्रहरूले बिस्तारै भान, दिगो निर्माण कार्यमा प्रतिबन्ध उठाउँदैछन् हेम्प प्रयोग गर्दै टेक अफ गर्न सेट गरिएको छ. त्यहाँ क्षमता छ। व्यक्तिहरू हाम्रो पर्यावरण प्रभाव कम गर्न र प्रकृतिसँगको सद्भाव प्रबर्द्धन गर्न आन्दोलनको पछाडि जानु आवश्यक छ।